Xasan Sheekh oo ka digay in la fashiliyo heshiiskii doorasho ee la gaaray | Allbalcad Online
Home WARARKA Xasan Sheekh oo ka digay in la fashiliyo heshiiskii doorasho ee la...
Xasan Sheekh oo ka digay in la fashiliyo heshiiskii doorasho ee la gaaray
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in siyaasiyiinta mucaaradka ay u diyaar garoobeen doorashooyinka dadban ee dalka laga qabanayo, taas oo ay ku heshiiyeen hoggaamiyeyaasha Siyaasadeed ee dalka.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in aysan jirin baqdin ay ka qabaan ka qeyb-galka doorashaooyinka, isaga oo ka jawaabayay Warar soo baxayay oo sheegay in markii lagu dhawaaqay in doorashada waqtigeeda ay ku dhaceyso ay Siyaasiyiinta mucaaradka walwal ka muujiyeen ka qeyb-galka doorashada una diyaarsaneyn.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray Xasan Sheekh in doorashada lagu heshiiyay mid ka weyn ay dhankooda u diyaar garoobeen, isaga oo ka digay in la fashiliyo qabsoomida doorashada ay ku heshiiyeen Madaxda Dowladda & Dowlad goboleedyada.
Hadalkaan ayaa waxaa uu sheegay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Wareysi uu siiyay TV-Ga Saab, isaga oo sidoo kale sheegay in Magacaabis la’aanta Golaha Wasiirada aysan saameyn ku yeelaneyn doorashooyinka.
Previous articleFaa Faahin Dagaal ka dhacay G/Jubbada hoose
Next article“Waxaan ku talinayaa howsha Jowhar ka socota mid la mid ah in Beledweyne laga bilaabo” Cosoble.